Ajjeechaan Laas Veegaas gocha shororkii jedhamee maaliif waamamuu hafe? - BBC News Afaan Oromoo
Ajjeechaan Laas Veegaas gocha shororkii jedhamee maaliif waamamuu hafe?
Goodayyaa suuraa Kaayyoon Paadook maal akka turee fi meeshaa akkamii akka fayyadame ifaa ta'uu baatus, yoo xiqqaate qawwee 10 kutaa keessaa qaba ture jechuun poolisiin ni dubbata
Qondaaltonni Ameerikaa ajjeechaa nama umurii 64 Isteefan Paadook namoota 59 irratti raawwate gocha shororkii jedhanii akka hin waamne dafanii beeksisan.
Garuu namoonni baay'een; ajjeechaa akkasii seenaa Ameerikaa ammayyaa keessatti raawwatamee hin beekne akkamiin shororkeessummaadha jedhamee hin waamamu? jechuun gaafatu.
Namoonni gariin ammoo miidiyaa haawaasaarratti Paadook shororkeessaa jedhamuu mannaa, 'nama namaan adda ba'e' yookaan salphumatti 'namicha abbaa qawwee' maaliif jedhame jechuun qeeqaa jiru. Warri kaanis dhimmicha siyaasaafi amantaadhaan wal-qabsiisanii jiru.
Shororkeessaa kan jedhamu musliima yookaan gurraacha yoo ta'e qofaadha jechuun.
Hiikkaan Shororkeessummaa maalidharee?
Hiikkoowwan hedduun bu'aa osoo hin taane, kaayyoo haleellaan sun itti raawwatame irratti xiyyeeffatu. Seerri Federaalaa Ameerikaa shororkeessummaa yoo hiiku 'Kaayyoo siyaasaa/hawaasummaaf, mootummaa yookaan namoota nagaa yookaan qaama kamiyyuu burjaajessuuf humnaa fi jeequmsa seeraan alaa fayyadamuu' jedha.
Egaan, ajjeechaa suukanneessaa namni kun raawwaterra; kaayyoo isaatu ilaalama jechuu dha.
Poolisiin kaayyoo abbaa qawwee Laas Veegaas adamsaa jira
'Yeroo sanatti maal yaadaa akka ture beekuu hun dandeenyu,' jechuun dursaan poolisii Laas Veegaas Jooseef Laambaardoo Wixata dubbatan.
Bakka bu'aan Biiroo Qorannoowwan Federaalaa (FBI) Aaroon Ruus gama isaaniitiin eejensiin isaanii walitti dhufeenya namni kuniif gareewwan shororkii idil adduunyaa qaban hin argine jedhaniiru.
Bu'uura kanaan, Paadook shororkeessaa jedhamee hin waamamu.
Goodayyaa suuraa 'akkuma kophaa jiraatu ture' jechuun ollaan Paadook dubbata
Haa ta'u malee; kan Neevaadaa (kutaa biyyaa Laas Veegaas itti argamtu) hiikkaa seera federaalaatiin adda. Shororkeessummaan; 'gochaa shira, humna yookaan jeequmsa fayyadamuun namoota irratti miidhaa qaamaa yookaan du'a hawaasa waliigalaa irratti qaqqabsiisuu dha' jedha.
Kun ammoo balaa kanarratti waan sirriitti mullatudha.
Namoonni siyaasaa paartiilee Riippabliikaanaa fi Deemookraatonni tokko tokko, gocha shororkeessummaa jechuurra darbanii Paadookiin 'shororkeessaa biyya keessaa' jechuun waamaniiru, 'biyya keessas' ta'e kan alaa adda addummaa qabaachuu baatus.
BBC'n jecha kanatti fayyadamuuf baay'ee of eega. Seerri ittiin bulmaataa dhaabbatichaa; 'shororkeessummaan siyaasaan walqabatee waan raawwatamu dha' jedha. Jecha 'shororkeessummaa' jedhu eeruu qaama tokkoo malee fayyadamuu dhiisuuf ni yaala.
Itti gaafatamummaan keenya waan qabatamaa ta'e hordoftoonni keenya ilaalcha mataasaanii akka godhatan taasisuun eenyu eenyurratti maal hojjechaa akka jiru gabaasuudha.
Farra -goolii umtummaa